Cameron.....: တခါက စကားပွင့်ပုံပြင်.....
Posted by coral nyo at 00:21
ဖတ်ကောင်းလွန်းလို့ မျောသွားတယ်။ အိန်ဂျယ်လေးရဲ့တောင်ပံအောက်မှာ ထာဝရပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနားခိုနိုင်ပါစေ....။ :)
23 March 2012 at 04:19
မကြီးမိုးငွေ့ရဲ့အရေးအသားကတော့ လုံးဝ လက်လန်တယ်.....ကောင်းတယ်ဗျာ...ဖတ်ရင်းနဲ့ အဆုံးထိရောက်သွားတာ တစ်ချက်မှ ကွန်ပြူတာကနေ မျက်နှာမလွှဲလိုက်ရဘူး....တော်တော်ကောင်းတယ်.....အိန်ဂျယ်လေးရဲ့ အတောင်ပံလေးအောက်မှာ ထာဝရ နားခိုနိုင်ပါစေ..မကြီးမိုးငွေ့ရေ...
ဟားးးးးးးးးးးး တကယ်ပါပဲ အစ်မရာ.. ။ ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ် .။ ဖတ်ရင်းနဲ့ ဆွဲခေါ်သွားတယ်.။
ဒါနဲ့. အငဲရဲ့ မယုံနိုင်ဘူး...သီချင်းက ကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်တာ. အစ်မမိုးငွေ့လည်း နားထောင်ပုံ၇တယ်..။ ဂစ်တာနဲ့တီးပြီးဆိုလို့ သိပ်ကောင်းတဲ့သီချင်းလေ..။
အရမ်းကောင်းတယ်...ကော်ဖီတွေသောက်လေ့မရှိပေမဲ့ ရေးထားတာအသက်ဝင်တော့ ကော်ဖီရနံ့တွေတောင် ရလာသလိုခံစားရတယ်။ စမ်းလည်းသောက်ကြည့်ရမယ်။။ :D အိန်ဂျယ်ရဲ့တောင်ပံအောက်မှာ နွေးထွေးစွာ ထာဝရနားခိုနိုင်ပါစေ မမမိုးငွေ့....
လွမ်းစရာ အငွေ့အသက်လေးတွေ ပါလား။ လှပသက်ဝင် သစ္စာတရားတွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့
မနက်က ဖတ်ပြီးသွားပြီ...၊ကြိုက်လို့ ခုနောက်တစ်
လေးမို့လို့ အရင်ပို့စ်တွေလိုတောင် နောက်တီးနောက်
အိန်ဂျယ်ရဲ့တောင်ပဲတစ်စုံရယ်၊ ကော်ဖီနွေးတစ်ခွက်ရယ် နဲ့ဆိုရင် မမိုးဘဝပြည့်စုံပြီထင်ရဲ့း))